Maalmihii ugu horeeyey ee Ciise dunida ku kor noolaa – Akhbaarta Wanaagsan
Posted on August 9, 2016 October 12, 2016 by Maroodiga
Akhristayaasheena sharfta badan waxaan Markale idiin soo ban dhigaynaa qiso gaaban oo ku saabsan dhalashadii Ciise…Ka boggasha wacan…
waxyaabaha Qorniinka Quduuska ahi kaleeyahay arrinta kusaabsan Ciise ilmanimadiisii ee ( Axdigii Hore )
Hadda akhri tan: Mataayoos cutubka 1 iyo cutubka 2 iyo weliba Lukoos Cutubka 1 iyo kan 2 Mataayoos. Lukoos iyo Yooxaanaa waxay sidoo kale qoreen sheekooyin iyaga u gaar ah injiilka ku saabsan Ciise Masiix. Matayos iyo Luukos waxay noo sheegayaan wax ku saabsan dhalashada Ciise iyo ina adeerkiis, Yooxanaa Baabtiisaha. (Markoos ma noo sheegin waxyaalahaan sheekhadiisa)
Ciidamada reer Rooma waxay gacanta ku hayeen Reer israaiil markay Ciise iyo Yooxanaa dhasheen. Kaysar Awgustoos, ee Roomaanka ahaa ayaa askar u diray si ay magacyadooda usoo diiwaan geliyaaan (Luukos 2: 1). Waxa uu doonayay inuu tiriyo tirada Yuhuuda ah ee ku noolaa Israa’iil.
Si taas loo sameeyo Yuhuuddii waxay ahayd inay u safraan magaalada ay ku dhasheen. Nin Yuusuf la odhan jiray oo u doonayd gabar yar oo la odhan jiray Maryan ayaa waxay u safreen magaaladoodii taas oo la odhan jiray Beytalaxam si ay isu soo diiwaan geliyaan magacyadooda.
Maryan waxay lahayd uur. Waxay ahayd wax aad u xun in qof dumar ah oo aan la qabin inay uuraysato. Markuu Yuusuf ogaaday inay uur leedahay ,waxuu fakaray inaysan wax wanaagsan ahayn inuu maryam guursado ( Mataayoos . 1:19 ) . Laakiin malaa’igtii Ilaah ayaa riyo kula hadashay isaga. Markaasuu fahmay inay ka uuraysatay mucjiso xagga illaah . Markaasuu u qaatay Maryam xaas ahaan , laakiin ma uusan u galmoon iyada ilaa ay ka dhasho ilmaha yar waa Ciise Masiixiye ( 1:25 ) .
Waxay joogeen Beytlaxam oo Ciise halkaas ayuu ku dhashay . Ciise ma ahayn ina Yuusuf. Wuxuu ahaa Wiilkii Ilaah, wuxuu ka dhashay Maryan oo bigrad ahayd oo ruuxa Quduuska ah ee Ilaah ka uur raysatay (Matayoos 1:18,20 ) . Ilaah wuxuu arintaan u sameeyey si uu wiilkiisu u dhasho dembi la`aan noloshiisa .
Posted in All resources, Lectures, Qiso gaaban